उपनिर्वाचनको तयारी - Pradesh Today उपनिर्वाचनको तयारी - Pradesh Today
काठमाडौँ, ८ साउन । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका विभिन्न रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न आन्तरिक तयारीलाई तीव्र गराएको छ ।
आयोगका अनुसार, विभिन्न कारणले प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, स्थानीयतहअन्तर्गत गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चार, नगरपालिकाका प्रमुख एक तथा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षका ३८ पद हाल रिक्त छन् ।
दाङमा दुई स्थानमा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । दाङमा एकजना प्रदेशसभा सदस्य र एकजना वडा अध्यक्षको निधन भएपछि ति क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने भएको हो । दाङमा पनि दुई पदका लागि उपनिर्वाचन हुनेछ ।
दाङ क्षेत्र नं. ३ ‘ख’बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार ओलीको गाडी दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो भने घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ का वडा अध्यक्ष लक्षिण बुढाको रोगका कारण मृत्यु भएको हो । यी दुबै स्थानमा अहिले खाली छन् ।
मुलुकका ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा तोकिएका ईलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता दर्ताको काम निरन्तर भइरहेको छ ।
जिल्लास्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मतदाता दर्ता कार्यसञ्चालन भइरहेको ईलाका प्रशासन कार्यालयमध्ये आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा गई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यसै आवमा उपनिर्वाचनका काम सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचनमा भाग लिन मतदाता नामावलीमा नाम रहनु अनिवार्य हुन्छ ।
निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनु एवं मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनु सबै नागरिकको अधिकार र कर्तव्य पनि हो । उक्त कार्यमा आवश्यक सहयोगको लागि आयोगले आमनागरिक, राजनीतिक दल लगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ ।
आयोगले २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरेको थियो । निर्वाचन कानूनअनुसार, आयोगसँगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ । सम्भवत २०७६ को कार्तिक मंसिरमा निर्वाचनको मिति तय गरिने छ ।
व्यवसायीलाई कर प्रशिक्षण्
तीनदिने बाख्रापालन तालिम सुरु
सवारी कारवाहीबाट ५६ लाख राजस्व
चिउरीका बिरुवा वितरण